myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet v75.2 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း v75.2 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင့်ရဲ့ Indosat myIM3 လျှောက်လွှာအတွက်အားလုံး prepaid ရည်ရွယ်ချက်များသို့မဟုတ် postpaid နံပါတ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန် - သွေးခုန်နှုန်းနှင့်ခွဲတမ်းစစ်ဆေးအချက်အလက်များ၏ packets တွေကိုဝယ်ဖို့, Telephony နှင့် SMS ကို packages များနှင့်သီးသန့်အထူးနှုန်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်။ ဒေတာများအသုံးပြုခြင်းမရှိဘဲဤလျှောက်လွှာ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးပျော်ရွှင်ခံစားပါ!
သင့်ရဲ့ကြိုတင်ငွေဖြည့်အကြွေးများနှင့်ခွဲတမ်းအင်တာနက်, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့်သင့်အသုံးစရိတ်ထိန်းချုပ်ဖို့ SMS ကိုစစ်ဆေးပါ။ Postpaid အသုံးပြုသူများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေ့နိုင်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏လျှောက်လွှာကိုမှအခြား Ooredoo က Indosat အရေအတွက်က add နှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်သူတို့အားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။
Unlimited, လွတ်မြောက်ရေး, ခွဲတမ်းအပို, ခေါ်ရန် & SMS ကို, Umrah, ရုန်းမင်း, ခွဲတမ်း applications များ, နှင့်ပိုပြီး: တစ်ကသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဆွဲဆောင်မှု packages များ၏အမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ပါ။ သငျသညျကိုလည်းလက်ဆောင် အသုံးပြု. တစ်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများများအတွက်အထုပ်ကိုဝယ်လို့ရပါတယ်။
• myIM3 အတွက်အကောင်းဆုံးအပေးအယူ Get
myIM3 သငျသညျအသီးအသီးထုတ်ကုန် Indosat Ooredoo တို့များအတွက်အကောင်းဆုံးပေးပါ။ MyIM3 အသုံးပြုသူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စျေးနှုန်းများနှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားတွေ့ရှိရမရနိုင်သည်ကိုအထူးအထူးနှုန်းများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရလိမ့်မည်! အပိုဆောင်းခွဲတမ်း, အထူးလျှော့စျေး, အထူးစျေးနှုန်းနဲ့တခြားအကျိုးခံစားခွင့်, သာ myIM3 လျှောက်လွှာအတွက်ရ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ prepaid ပြန်ဖွင့်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာအသုံးပြုပါက, ဒေတာအထုပ်ကိုဝယ်ယူ, postpaid အသုံးပြုသူများအတွက်ဥပဒေကြမ်းများပေးဆောင်။ (မကြာမီလာတော့မည်) သင့်ရဲ့အကြွေး, PayPro, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘောက်ချာသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ် / ငွေကြိုကဒ်နဲ့ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ပါ။
သငျသညျ myIM3 အပေါင်းတို့နှင့်ထုတ်ကုန်အကူအညီ Center ကမှတဆင့် Indosat Ooredoo တို့အကြောင်းကိုလိုအပ်သမျှအချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေပါ။ သငျသညျ 24/7 အစေခံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတော်မူသောငါတို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
•အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုအင်တာနက်ခွဲတမ်း, ခေါ်ဆိုမှုများနှင့် SMS
•သင့်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအင်တာနက်, တယ်လီဖုန်းနှင့် SMS ဖြင့်တစ်ဦးအထုပ် Buy
•မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများမှဆုကြေးဇူးကို packages များ Send
• (postpaid အသုံးပြုသူများအတွက်) အပလီကေးရှင်းမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ဥပဒေကြမ်းများကိုကြည့်ရှုပြီးပေးဆောင်
•ထုတ်ကုန် Indosat Ooredoo တို့များအတွက်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း
•တဦးတည်း app ထဲမှာမျိုးစုံနံပါတ်များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်
•အ 4G ကွန်ယက်ကိုလွှမ်းခြုံ Check
•အော်တိုရဲ့ login အင်္ဂါရပ်
•သတင်းအချက်အလက် PIN နံပါတ်နှင့် PUK
•ဒေတာချွေတာ၏ Mode ကို
အကူအညီ Menu ထဲမှာအင်ဒီရာရှာဖွေတွေ့ရှိသို့မဟုတ် http://im3.do/help
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet အား အခ်က္ျပပါ
tjinhasan စတိုး 3.65k 859.53k
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း v75.2
ထုတ်လုပ်သူ Ovidiu Latcu
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://indosatooredoo.com/id/personal/privacy-policy
App Name: myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet
Release date: 2019-06-18 14:40:36
လက်မှတ် SHA1: 2C:95:C6:46:32:01:39:A1:52:38:4D:59:90:27:B3:49:1C:AE:BA:12
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Pure Developer
အဖွဲ့အစည်း (O): Pure Technology
နယ်မြေ (L): Jakarta Selatan
နိုင်ငံ (C): ID
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Jakarta
myIM3 - Cek Kuota & Beli Paket Internet APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ